Zenius အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် Zenius - Belajar Online Seru | UTBK, UM, PTS, PAS
သငျသညျ (စသည်တို့ကို UI ကို, UGM တွေ့) ကို Mandiri စာမေးပွဲများအတွက်ပြင်ဆင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကူညီနိုင်သည်ကိုအွန်လိုင်းသင်ယူမှုပလီကေးရှင်းကိုလေ့လာပါ။ သူတို့ရဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးကျူရှင်ဆရာများသည်နှင့်အတူမှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်၏ပြင်ဆင်မှုလည်းရှိပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်ကာတွန်း၏ပုံစံအတွက်ထုပ်ပိုးသောသင်ခန်းစာဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုသလား? Zenius, သင့်အကြိုက်ဆုံးအွန်လိုင်း bimbel လျှောက်လွှာအတွက်အရာအားလုံး။ ဒါဟာ 2004 ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ချိန် မှစ. 😘
, Zenius ထိုကဲ့သို့သော UI ကို, ITB နှင့် UGM အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များကိုဖြတ်ပြီးကျောင်းသားဟောင်းများပျံ့နှံ့ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာကအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောတက္ကသိုလ်များအတွက်ပြန့်ပွားမသာ, ရာပေါင်းများစွာ Zenius ကျောင်းသားဟောင်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏လည်းအမျိုးမျိုးသောလူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီများတွင်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားခဲ့ကြသည်😆 Zenius သင် Zenius အတွက်
1 ။ အခမဲ့ 2
90,000 ဗီဒီယိုအယူအဆလူတန်းစား 1-12 စောင့်ကြည့်ဖို့။ 3
Zenius ပတ်သက်. ဘဏ်များ၏န့်အသတ်ကိစ္စကငျြ့သုံးနိုငျသညျ။ ရှုပ်ထွေးသင်္ချာ? ချက်ချင်းဓါတ်ပုံများ, Scan ဖတ်နှင့် The သင်ယူမှုအထုပ်ပြင်းထန်စွာ Zenius အွန်လိုင်း Bimbel မှာသငျသညျ UI ကို 2021 မကျြနှာကိုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွငျဆငျအကူအညီနဲ့ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်
အတွက်အဖြေကိုရဖို့ ။ Zenius ခုနှစ်, UI ကိုတွေ့မြင်, သင်ရရှိမည်:
1 ။2အထူးပါထွက် packages များ 2
ရန်နှင့်ဆွေးနွေးမှုရည်ညွှန်းသည်။ SIMAK UI ကို3ရင်ဆိုင်ခြင်းမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ၏ session နှင့်လမ်းညွှန်မှု။ တိုက်ရိုက် Class ကိုတနင်္လာနေ့⁠-⁠သောကြာနေ့ Bareng အကောင်းဆုံးထိန်း Zenius5ရက်သတ္တပတ်4။ သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဌာနအကြောင်းကိုအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး 5
။ အမျိုးမျိုးသောဗီဒီယိုအားသဘောတရားများကိုအခမဲ့သုံးစွဲနိုင် 6
။ အထူးအလေ့အကျင့်အလေ့အကျင့် SIMAK UI ကို 7
။ Zenius ပိုင်ဆိုင်မှုများ
အားလုံးအင်္ဂါရပ်များ Zenius Optima အတွက် Zenius Optima
, သင်အကောင်းဆုံးကျူရှင်ဆရာများသည်နှင့်အတူကျောင်းစာမေးပွဲပြင်ဆင်မှု (မှတ်နှင့် Pat) join လို့ရပါတယ်🧑🏫။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Optima ၌သင်တို့လည်းရရှိမည်:
1 ။ သငျသညျ 2
အဘို့မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ် Interactive မှဘိတ်အထူးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 3
ကိုအကောင်းဆုံးကျူရှင်ဆရာများသည်နှင့်အတူ 250 နာရီကြာအပြန်အလှန် Bimbel ကျောင်းဘာသာရပ်များ။ သင်ရွေးချယ်ထားသောဘာသာရပ်နည်းပြဆရာ4မေးခွန်းနှင့်အဖြေ session တစ်ခုနှင့်လမ်းညွှန်မှု။ Zenius ကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Mandiri စာမေးပွဲများကိုအတွက် Zenius ပိုင်ဆိုင်မှုများ
Zenius ကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Mandiri စာမေးပွဲများကိုအားလုံးအင်္ဂါရပ်များ
, သင်စူပါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အချိန်မရွေးသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ မှတပါး, သငျသညျမြားကိုလညျးရနိုင်သည်
1 ။ သငျသညျ Mandiri စာမေးပွဲကျောင်းပစ္စည်းများ၏အယူအဆ 2
နားလည်အကူအညီနဲ့ဗီဒီယိုလှုပ်ရှားနေသော။ အများဆုံး3အများဆုံး Mandiri စာမေးပွဲအဘိတ်များအတွက်နေ့စဉ်, အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု။ လုပ် Auto-ngerni! 4
သောအလေ့အကျင့်မေးခွန်းများကိုအကြောင်းဗွီဒီယိုဆှေးနှေးရနျ။ UTBK ကြည့်ပါ-Out နှင့်အတူ IRT အမှတ်ပေး, ဆွေးနွေးချက်စေရန်အကူအညီကိုသင်နှင့်အတူအပြီးအစီး #Jagoutbk
Zenius ကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် Zenius ပိုင်ဆိုင်မှုများ
1: complete, သင်ကအောက်ပါအင်္ဂါရပ်များရယူနိုငျပါသညျ။ သငျသညျ
2 သင်ယူခြင်း၏အယူအဆနားလည်အကူအညီနဲ့ဗီဒီယိုလှုပ်ရှားနေသော။ အားလုံးကျောင်းမှဘာသာရပ်များများအတွက်လစဉ်အပတ်စဉ်နှင့်နေ့စဉ်ပေါ်လေ့ကျင့်ခန်းမေးခွန်းများကို, 3
။ ! // www:
download, လျှောက်လွှာသင်ယူ Zenius အပေါ် လာ. , ကျွန်တော်တို့ရဲ့ medsos အတွက်နက်ရှိုင်းတဲ့ Instagram ကို
စေမယ့်အထဲကရှာတွေ့သောလေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းဗွီဒီယိုဆှေးနှေးရနျ။ instagram com / zeniuseducation / "> @ zeniuseducation
Facebook မှာ -
YouTube ကို -
ဘာအသစ်လဲ Zenius - Belajar Online Seru | UTBK, UM, PTS, PAS 2.5.9
Cari Tahu Semua Informasi Produk Zenius di Sini! | #ZeniusUntukSemua
Proses Belajar Ala Zenius yang Sebaiknya Kamu Tahu
Pusing Belajar Materi UTBK? #GantiCaraBelajar Lo Pakai Zenius!